Fitazonana mpanjifa: statistika, paikady ary kajy (CRR vs DRR) | Martech Zone
Izahay dia mizara kely momba ny fahazoana fa tsy ampy ny momba fitazonana ny mpanjifa. Ny paikadim-barotra lehibe dia tsy tsotra toy ny fitarihana fitarihana bebe kokoa, momba ny fitondrana fiara mitarika mety ihany koa. Ny fitazonana ny mpanjifa dia ampahany foana amin'ny vidin'ny fahazoana vaovao.
Miaraka amin'ny areti-mandringana, nidina tampoka ireo orinasa ary tsy dia mahery setra tamin'ny fahazoana vokatra sy serivisy vaovao. Ankoatr'izay, ny fivoriana fivarotana olona sy ny kaonferansa momba ny varotra dia nanakana ny paikadin'ny fahazoana orinasa amin'ny ankamaroan'ny orinasa. Raha nitodika tany amin'ny fivoriana sy hetsika virtoaly izahay dia nanjary mafy ny fahaizan'ny orinasa maro hitondra ny varotra vaovao. Midika izany fa ny fanamafisana ny fifandraisana na ny fampiakarana mpanjifa ankehitriny aza dia zava-dehibe amin'ny fitazonana ny vola miditra sy ny orinasan'izy ireo.
Ny fahaiza-mitarika amin'ny fikambanana mitombo dia noterena hijery akaiky ny fitazonana ny mpanjifa raha ahena ny fahafaha-mahazo. Tsy misalasala aho milaza izany vaovao mahafaly izany… nanjary lesona miharihary ho an'ny fikambanana maro ny tsy maintsy nanamafisan'izy ireo ny paikady fitazonana ny mpanjifany.
Antontan'isa fihazonana ny mpanjifa
Betsaka ny vidiny tsy hita maso izay hitazona ny mpanjifa tsy dia tsara loatra. Ireto misy antontan'isa miavaka izay tokony hampitombo ny fifantohanao amin'ny fitazonana ny mpanjifa:
67% of mandany vola bebe kokoa ny mpanjifa miverina amin'ny taona fahatelo nividianany orinasa iray noho izy enim-bolana voalohany.
Amin'ny fampitomboana ny tahan'ny fitazonana ny mpanjifa 5%, afaka manao izany ny orinasa mampitombo tombony tamin'ny 25 ka hatramin'ny 95%.
82% amin'ireo orinasa no manaiky izany Ny vidin'ny fitazonana ny mpanjifa dia kely noho ny fananan'ny mpanjifa.
68% ny mpanjifa tsy hiverina amin'ny orinasa aorian'ny fananana traikefa ratsy miaraka amin'izy ireo.
62% ny mpanjifa mahatsapa ny marika izay tsy fivadihan'izy ireo indrindra dia tsy ampy manome valisoa ny tsy fivadihan'ny mpanjifa.
62% ny mpanjifa amerikana nifindra tamin'ny marika hafa tamin'ny taona lasa noho ny mahantra mpanjifa traikefa.
Manisa ny tahan'ny fihazonana (mpanjifa sy dolara)
Tsy ny mpanjifa rehetra no mandany vola mitovy amin'ny orinasao, ka misy fomba roa hanisana ny tahan'ny fihazonana:
Taham-pitanana ny mpanjifa (CRR) - ny isan-jaton'ny mpanjifa mitazona anao mifandraika amin'ny isa nanananao tamin'ny fiandohan'ny vanim-potoana (tsy manisa mpanjifa vaovao).
Tahan'ny fihazonana dolara (DRR) - ny isan-jaton'ny fidiram-bola tazominao ho an'ny karama azonao tamin'ny fiandohan'ny vanim-potoana (tsy manisa karama vaovao). Fomba fikajiana an'io ny fizarana mpanjifa amin'ny alàlan'ny vola miditra, avy eo ny fikajiana ny CRR isaky ny laharana.
Orinasa maro izay mahazo tombony be dia be no manana fihazonana mpanjifa ambany fa fitazonana dolara avo rehefa miova avy amin'ny fifanarahana kely kokoa ka hatrany amin'ny fifanarahana lehibe kokoa. Amin'ny ankapobeny, mahasalama sy mahasoa kokoa ny orinasa na dia very mpanjifa kely aza.
Ny torolàlana farany amin'ny fitazonana ny mpanjifa
Ity infographic avy amin'ny M2 Andrasana antsipiriany momba ny antontan'isa momba ny fitazonana ny mpanjifa, ny antony mahatonga ny orinasa hamoy ny mpanjifa, ny fomba fanaovana kajy ny tahan'ny fitazonana ny mpanjifa (CRR), ny fomba fanaovana kajy ny tahan'ny fihazonana dolara (DRR), ary koa ny antsipiriany fomba hitazomana ny mpanjifanao:
tsy ampoizina - gaga ny mpanjifa amin'ny tolotra tsy ampoizina na na sora-tanana aza.
fanantenana - Ireo mpanjifa diso fanantenana dia matetika avy amin'ny fametrahana zavatra tsy ampoizina.
Fahafaham-po - Araho maso ireo tondro fampisehoana lehibe izay manome fahitana ny fahafaham-pon'ny mpanjifanao.
Feedback - mangataha valiny momba ny fanatsarana ny traikefan'ny mpanjifanao sy fampiharana ireo vahaolana izay misy fiatraikany lehibe indrindra.
Miresaha - ampitao hatrany ny fanatsarana anao sy ny sanda entinao amin'ny mpanjifanao rehefa mandeha ny fotoana.
Ireo mpanjifa mahafa-po fotsiny dia tsy ho ampy hahazoana ny fahatokiany. Fa kosa, tsy maintsy miaina serivisy miavaka mendrika ny raharaham-barotra famerimberenana sy ny fanolorana azy ireo izy ireo. Fantaro ireo anton-javatra nahatonga io revolisiona ho an'ny mpanjifa io.
Rick Tate, Mpanoratra ny The Service Pro: Mamorona mpanjifa tsara kokoa, haingana kokoa ary samy hafa
Fampahafantarana: Mampiasa ny rohy mpampifandray an'i Amazon amin'ny bokin'i Rick Tate aho.
Tags: crrfitadiavana mpanjifampanjifa tsy mivadikafitazonana ny mpanjifatahan'ny fitazonana ny mpanjifaCustomer satisfactionSerivisy ho an'ny mpanjifatahan'ny fihazonana dolaradrrm2 mijanonafihazonanafahazoana media sosialyManinona no miala ny mpanjifa
29 Aogositra 2013 amin'ny 12:52 PM
29 Aogositra 2013 amin'ny 10:56 PM
Um. Wow. ..
5 Nov 2013 amin'ny 3:31 maraina
Mazava mazava! Ny fifandraisan'ny mpanjifa dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fifandraisan'ny mpanjifa amin'ny orinasa.